IVeg Bagicha Organic Farm Stay (enePool yaBucala)
Ifama sinombuki zindwendwe onguAnshul
Ngaba ulungele amava obomi bokwenyani baseRural Organic? Iinkamela zisidla amasimi akufuphi nefama, iintaka ezintyilozayo neenkomo zintyiloza. Abahlobo / usapho, ukutya kunye nokuphola, kwindawo ezolileyo enoxolo, ejikelezwe ngamasimi aluhlaza kunye neentaba, kude nesiphithiphithi sesixeko! ingaba ngcono kunale?
1. Ifama ye-Organic ikwisiqingatha seyure ukusuka kwiZiko leSixeko sase-Indore. Le ndlu yakhiwe ngokukhethekileyo kwaye inefama yanamhlanje kwi-10 Acres yeFama eQinisekisiweyo ye-Organic. Indawo yokuhlala engekude nesixeko kodwa kuxolo nokuba wedwa.
2. Indlu ibekwe kumgangatho osezantsi, ine:
Ikhitshi enefriji kunye ne-microwave
Igumbi lokulala eli-1 elikhulu elinegumbi lokuhlambela elincanyathiselwe
Igumbi lokuhlambela eli-1 eliqhelekileyo
Igumbi eli-1 eliNcinci elineebhedi eziPhambili zikaKumkanikazi (ngaphandle kweWashroom, inokusebenzisa Igumbi lokuhlambela eliQhelekileyo / Izindlu zangasese)
Igumbi lokuhlala eli-1 elinesofa yezihlalo ezi-7 (inokuhlala umntu omdala omnye ukuze alale)
Indawo e-1 eyahlukileyo enesofa (inokuhlala umntu omdala omnye ukuze alale)
24 X 7 Uqhagamshelo lwe-Intanethi olukhawulezayo
2 Izitovu zomlilo zenkuni zokupheka kwesintu
1 IBarbecue yamalahle
3. Ixabiso libandakanya i-Bed-linen kunye neTowels kunye notshintsho lweveki, amanzi, i-LPG yokupheka igesi, ifriji, uMbane, isifudumezi samanzi, i-WiFi, indawo yokupaka, i-Air Cooler kunye nezixhobo zaseKitchen.
Sinayo intente yeCamping (yabantu abadala aba-2 - bona kwigalari yeefoto) enokubekwa kuyo nayiphi na indawo efikelelekayo ngaphakathi kweFama yeKhampasi. Ukuba iqela linabantu abangaphezu kwe-6, iindwendwe zinokusicela le ntente yokukhempisha ukulungiselela ukulala eya kufumaneka ngeentlawulo ezongezelelweyo.
4. Indawo yokuhlala inazo zonke izixhobo onokuzifuna ukuzipheka kuquka ityuwa, iswekile, iti kunye nekofu. Kufuneka uphathe eyakho igroccery / veggies ukuba unqwenela ukupheka. Kwimeko apho ungaziva ulungiselela ukutya, zininzi iindawo zokutyela ezilungileyo nezifikelelekayo ezizisa kwindawo leyo (uodolo ngeNkqubo yokuodola kokutya kwi-Intanethi-Zomato / Swiggy njl njl).
5. Kukho indawo evulekileyo ngaphandle kwendlu enezitulo, itafile kwaye ungalungisa ibarbecue yakho, utye ukutya kwakho, ujonge intlalontle yakho okanye uphumle nje ujingi lwangaphandle kunye nempepho epholileyo.
6. Indawo evulekileyo kwakhona Bandakanya i-32 yeenyawo kunye ne-16 iinyawo kunye ne-4.5 Feet ubunzulu "PHEZU KOMHLABA WOKUSWIMING POOL". Umntu unokukonwabela ukuqubha kwindawo evulekileyo yokuqubha esibhakabhakeni enomthunzi omncinci wemango kunye nemithi yeziqhamo. Ukuba unabantwana okanye awuyazi into yokuqubha sicele iLife jacket (yabantwana) kunye neetyhubhu zokuqubha (zabantu abadala). Ungaphatha iibhatyi zakho zoBomi kunye neetyhubhu zedama lokuqubha kunye nawe.
A. ABANTWANA abavumelekanga ukungena equleni ngaphandle kwabazali/nomgcini.
B. Ukujuba okanye ukuDiving ePool akuvumelekanga.
C. Okutyiwayo/Ukutya kuthintelwe ngokungqongqo ngaphakathi equleni kwaye izilwanyana zasekhaya azivumelekanga kwindawo yedama.
D. Izinto ezibukhali ezifana nemela, ifolokhwe, iinaliti, incakuba kunye nayo nayiphi na into yeglasi azivumelekanga kufutshane nendawo yedama.
E. Ukuze amanzi ahlale ecocekile injongo yokucoca i-amd , ubukhulu becala sigquma ichibi kwaye kuphela ngesicelo seendwendwe liya kuvulelwa ukusetyenziswa.
F. Amaxesha ePool aqala ngentsimbi yesi-8 kusasa ukuya kweyesi-9 ngokuhlwa. Ukusebenzisa iPool emva kwentsimbi yesi-9 ebusuku akuvumelekanga.
G. Nxiba iiTrunks zokuQubha ezifanelekileyo / Isinxibo kuphela xa usebenzisa iPool.
7. Kukho indlu yenkomo efama enazo zonke iinkomo zohlobo lwamaIndiya. umntu unokukonwabela ukuzondla, ukusenga nokudlala namathole.
8. Iindawo ezikufuphi-Kukho iTempile ye-Lord Shiva eyaziwayo nendala kakhulu emi elunxwemeni lweNtaba iDevguradiya. Umntu kufuneka atyelele kube kanye ngelixa ehlala efama. Kwakhona, umntu kufuneka atyelele, i-Ujjaini (iLali encinci enePaki yaManzi eyenziwe ngokudibanisa imilambo emibini). Ipaki yamanzi yaseCrecent, kwenye ipaki yamanzi enomxholo omhle umntu kufuneka achithe usuku.
9. Kukho intaba enkulu emelene neFama apho umntu anokwenyuka khona kwaye onwabele impepho epholileyo kunye nembono echukumisayo evela phezulu. Le nduli ithe tyaba ukusuka phezulu kwaye umntu unokonwabela isidlo sasemini kunye nabahlobo abangaphaya. Elona xesha lilungileyo lisukela ngoSeptemba ukuya kuJanuwari lokuhamba ngeTrekking.
10. Imoto okanye ibhayisekile iyafuneka kwindawo ezikufutshane. Nangona kunjalo, singakwazi ukunceda iindwendwe zifumane imoto/iBhayisekile eziza kuyirenta ukuba azinabani.
11. Izinja neekati zamkelwa kwikhampasi yasefama (kungekhona ngaphakathi kwendawo yasefama). Nkqu neeBikers bamkelekile, baya kufumana i-inshorensi kunye nendawo ekhuselekileyo yeebhayisekile zabo.
12. E-Veg Bagicha, sikholelwa, sikhuthaza kwaye siqhelisela ubuNdlobongela (अहिंसा) kwaye yiyo loo nto ukuPhekwa kwe-Non-Veg kunye / okanye ukutya ngaphakathi kwikhampasi yasefama akuvumelekanga.
13. INdawo yaseFama AYIKUTHWAYO kwaye ukuba ubani unqwenela ukutshaya, bangakwenza ngaphandle kwendawo leyo.
14. Ukusetyenziswa kotywala ekhampasini akuvumelekanga ngokungqongqo. Ngaphaya koko, UkuSetyenziswa kwalo naluphi na uhlobo lweziyobisi ezingekho mthethweni/ezithintelweyo/ Ukuvalwa kweziyobisi akusayi kunyanyezelwa nangaliphi na ixabiso. Ityala lilo, iindwendwe kufuneka zimke ekhampasini ngoko nangoko.
15. Sigcina ifama yethu ikhuselekile kwaye ikude nenkunkuma engonakaliyo (iNkunkuma yePlastiki) kungoko sicela undwendwe lwethu ukuba lulahle iplastiki kunye nenye inkunkuma kwimigqomo ebonelelwe ngaphakathi ekhampasini kwaye UNGAYIbeki okanye uyilahle kwenye indawo.
4.92 ·Izimvo eziyi-36
Ifama iphakathi kweenduli ezimbini kwaye inika umbono omangalisayo wendawo ekufutshane ngexesha leMonsoon kunye naseBusika.
Umshisekeli unokunyuka induli kwaye onwabele umbono ophefumlayo ngempepho ebhudla ngamandla ngexesha lonyaka.
Kukuhambo lwemizuzu engama-30 ukusuka kumbindi wesixeko kwaye kufutshane nepaki yamanzi eyaziwayo apho umntu anokonwabela usuku lokukhwela amanzi kunye nosapho / nabahlobo bakho.
Kukho iTempile edumileyo nendala kakhulu yeNkosi Shiva kwiinduli zeDevguradia ekumgama oziikhilomitha ezi-2 kuphela ukusuka efama. Umntu akufuneki aphoswe kukundwendwela loo ndawo ngelixa ehlala efama.
Umbuki zindwendwe ngu- Anshul
Ngeimeyile nangefowuni okanye ngokobuqu eFama.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Indore